စပိန်ကြိယာ Seguir ၏ conjugation
"Seguir" ၏ conjugation
Seguir များသောအားဖြင့်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဆက်လက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အောက်ပါရည်ညွှန်းတဲ့မျှမျှတတဘုံကြိယာဖြစ်ပါတယ်။ တူညီသော conjugation ပုံစံကိုလိုက်နာကြောင်းတည်းသောသည်အခြားကြိယာထိုကဲ့သို့သော conseguir အဖြစ် seguir (မှီသို့မဟုတ်အောင်မြင်ရန်) နှင့် perseguir (ကိုလိုက်တရားစွဲဆိုသို့မဟုတ်ညှဉျးဆဲရန်) ပေါ်တွင်အခြေခံကြိယာဖြစ်ကြသည်။
seguir ၏ conjugation ကဲ့သို့သောကြိယာ၏ဆင်တူသည် vestir နှင့် pedir ပင်စည်၏ -e- တခါတရံ -i- မှပြောင်းလဲကြောင်းပါ။
မမှန်ပုံစံများ boldface အတွက်အောက်တွင်ပြနေကြသည်။ ဘာသာပြန်ချက်များလမ်းညွှန်အဖြစ်ပေးထားကြသည်နှင့်စစ်မှန်သောအသက်တာ၌အခြေအနေတွင်နှင့်အတူကွဲပြားလိမ့်မည်။
Seguir ၏ infinitive
Seguir ၏ Gerund
Seguir ၏ participle
yo sigo, tú sigues, usted / El / အဲလာ sigue, nosotros / seguimos အဖြစ်, vosotros / seguísအဖြစ်, ustedes / ellos / အဲလာ siguen (ငါသည်သင်တို့ကိုဆက်လက်ဆက်လက်သူ, စတာတွေဆက်လက်)
Seguir ၏ Preterite
yo seguí, tú seguiste, usted / El / အဲလာsiguió, nosotros / seguimos အဖြစ်, vosotros / seguisteis အဖြစ်, ustedes / ellos / အဲလာ siguieron (ငါဆက်, သင်ဆက်လက်သူမက, စတာတွေအဆက်)
yo seguía, túseguías, usted / El / အဲလာseguía, nosotros / seguíamosအဖြစ်, vosotros / seguíaisအဖြစ်, ustedes / ellos / အဲလာseguían (ငါသည်သင်တို့ကိုဆက်လက်အသုံးပြုဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့သူ, စတာတွေဆက်လုပ်ဖို့အသုံးပြု)
yo seguiré, túseguirás, usted / El / အဲလာseguirá, nosotros / seguiremos အဖြစ်, vosotros / seguiréisအဖြစ်, ustedes / ellos / အဲလာseguirán (ငါသည်သင်တို့ကိုသူ, စတာတွေဆက်လက်လိမ့်မည်, ဆက်လက်လိမ့်မည်, ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်)
Seguir ၏ conditional
yo seguiría, túseguirías, usted / El / အဲလာseguiría, nosotros / seguiríamosအဖြစ်, vosotros / seguiríaisအဖြစ်, ustedes / ellos / အဲလာseguirían (ကျနော်ဆက်လက်မယ်လို့, သင်စသည်တို့ကိုသူမကဆက်လက်မယ်လို့ဆက်လက်မယ်လို့)
Seguir ၏ပစ္စုပ္ပန် Subjunctive
ငါစသည်တို့ကိုသူမကဆက်လက်အကြောင်း, သငျသညျဆကျလကျအကြောင်း, ဆက်လက်ပြုလုပ် siga, Que tú sigas, Que usted / El / အဲလာ siga, Que nosotros / sigamos အဖြစ်, Que vosotros / sigáisအဖြစ်, Que ustedes / ellos / အဲလာ sigan (yo Que )
Seguir ၏မစုံလငျ Subjunctive
Que yo siguiera (siguiese), Que tú siguieras (siguieses), Que usted / El / အဲလာ siguiera (siguiese), siguiéramos (siguiésemos) အဖြစ် Que nosotros / Que vosotros / siguierais (siguieseis) အဖြစ်, Que ustedes / ellos / အဲလာ siguieran (ကျနော်စသည်တို့ကိုသူကဆက်လက်အကြောင်း, သငျသညျဆကျလကျအကြောင်း, ဆက်လက်ကြောင်း) (siguiesen)
sigue (tú), အဘယ်သူမျှမ sigas (tú), siga (usted), sigamos (nosotros / ကဲ့သို့), seguid (vosotros / ကဲ့သို့), အဘယ်သူမျှမsigáis (vosotros / ကဲ့သို့), sigan (ustedes) (ဆက်လက်ပါဘူး, ဆက်လက် ) ကိုဆက်လက်, စတာတွေရဲ့ဆက်လက်ပါစေ
Seguir ၏ compound တင်းမာနေ
အဆိုပါ စုံလင်သောတင်းမာနေ ၏သင့်လျော်သောပုံစံကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ထားကြပါတယ် haber နှင့် အတိတ် participle , seguido ။ အဆိုပါ တိုးတက်သော သောင်းချီကိုအသုံးပြုဖို့ estar ယင်းနှင့်အတူ gerund , siguiendo ။
Seguir ၏ conjugation နှင့်ဆက်စပ်ကြိယာဖေါ်ပြသည်နမူနာဝါကျများ
hay nueve မျှ escritas က de Facebook ကို Que todo necesitan seguir reglas ။ (ကိုးထုတ်ထားတဲ့ Facebook ကလူတိုင်းကို။ နောက်တော်သို့လိုက်လိုအုပျခြုပျရှိပါတယ် Infinite ။ )
mi experiencia como nutricionista ငါ့ကိုအန်စာတုံး Que muchas ဟန် seguido Dieta က de adelgazamiento Que မျှ Les ဟန် funcionado, (တစ်ဦးအာဟာရအဖြစ်အကြှနျုပျ၏အတှေ့အကွုံများစွာသောလူသူတို့အဘို့အအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းအလေးချိန်-အရှုံးအစားအစာနောက်တော်သို့လိုက်ကြပြီငါ့ကိုပြောပြတယ်။ personas စုံလင်သောတင်ပြမည် ။ )
si sigo estudiando estaré lista မသန်စွမ်းမိုင် examen pero muy cansada ။
(ကျနော်လေ့လာနေအပေါ်စောင့်ရှောက်လျှင်ငါသည်ငါ့စမ်းသပ်မှုများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပေမယ့်အလွန်ပင်ပန်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ပြဆိုတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ )
¿ Estamos siguiendo Las de la maestra recomendaciones? ကျွန်တော်ဆရာရဲ့အကြံပြုချက်များကိုအောက်ပါပါသလား? တိုးတက်သောဆက်သ ။ )
un enjambre က de abejas persiguió 48 horas တစ် un အော်တို durante ။ (48 နာရီ။ တစ်ကားကိုအပြီး လိုက်. ပျား၏တစ်ဦးက swarm Preterite ။ )
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los manifestantes seguían con sus gritos ။ (အဆိုပါဆန္ဒပြသူများသူတို့ရဲ့အသံတွေနှင့်အတူဆက်လက်။ မစုံလငျ ။ )
Nunca ခြံ en renunciar y ကseguiré luchando ။ (ငါထပေးခြင်းကိုစဉ်းစားတော့မှငါတိုက်ပွဲများအပေါ်စောင့်ရှောက်မည်။ အနာဂတ် ။ )
လာ့စ်ဗီး encuestas indican Que el presidente conseguiría la reelección en Repúblicaရာဒိုမီနီ။ (အဆိုပါရွေးကောက်ပွဲ၌သမ္မတဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံရှိသူ၏ Re-ရွေးကောက်ပွဲတွင်အနိုင်ရလိမ့်မည်ဟုဆိုကြသည်။ အခြေအနေအရ ။ )
todo está organizado မသန်စွမ်း Que sigas jugando ။ သငျသညျကစားအပေါ်စောင့်ရှောက်နိုင်အောင် (အရာအားလုံးဖွဲ့စည်းထားသည်။
ပစ္စုပ္ပန် subjunctive ။ )
¿ Y ကို Que si persiguiéramos nuestros sueños? (အဘယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်? မစုံလငျ subjunctive ။ )
Sigue tu propio camino အပြစ်တရား mirar atrás (။ နောက်ပြန်ရှာနေစရာမလိုဘဲသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းကြောင်းအပေါ် Continue အလွန်အရေးကြီးသည် ။ )
ပြင်သစ်ဆန္ဒပြပွဲများနာမဝိသေသန: Adjectifs Démonstratifs
'' Querer '' ၏ conjugation
ဒီဘုံဂျာမန်အမှားသတိပြုပါ: '။ ich Bin ကို Kalt' '
'' Caerse '' vs. '' Caer ''
စပိန် Conjunction အကြောင်း 10 အချက်အလက်
Il vaut mieux Que အဆိုပါ subjunctive လိုအပ်ပါသလား?
စုပေါင်း Noun အနည်းကိန်းရှိပါသလားသို့သော်မကြာခဏအများကိန်းအဓိပ်ပာယျနှငျ့အတူ
ပြင်သစ်ပုံမှန် -RE ကြိယာ
ဂြာမနျတွင်အဆိုပါ Subjunctive လက်ရှိ
Discover တိုယိုတာ SUVs
ရိုးရှင်းသော Alkene နေရာများအမည်ရန်ကဘယ်လို
အဆိုပါ NASCAR Budweiser ဗိုလ်လုချိန်ဆိုတာဘာလဲ
Charlotte Perkins Gilman အားဖြင့် "ဒီအဝါရောင် Wallpaper" (1892)
စပိန် Conquistadors ၏ချပ်ဝတ်တန်ဆာများနှင့်လက်နက်များ
ယင်းသင်္ချာ Concept ကိုဧရိယာ၏အရေးပါမှု
GK Chesterton ရဲ့ '' မြေဖြူတွေသုံးပြီးတစ် Piece ''
အင်္ဂလိပ် Grammar အတွက်ဖော်ထုတ်ခြင်းနှုတ်
Gemini ဟာအမွှာပူး: ရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာများ
ဂန္ထဝင်စာအုပ်တိုင်း LDS အဖွဲ့ဝင် Read သင့်သ
အဘယ်သို့ငါဆီထဲမှာပန်းချီ Start သလား?
အဆိုပါ 10 အသေအပျောက်အများဆုံးရေကြောင်းတွားသွားသတ္တဝါများ
ဝိန်း Fort လိုအပ်ချက်သည်နှင့်ဂရိတ် Meadows ၏တိုက်ပွဲ
တစ်ဦး Baluster ကဘာလဲ? တစ်ဦး Balustrade ဆိုတာဘာလဲ